Jaamacadaha Sweden oo kaalin ka galay aduunka | Somaliska
8 ka mid ah jaamacadaha Sweden ayaa kaalin ka galay liiska jaamacadaha ugu wanaagsan aduunka oo sanadkasta ay samayso shirkada QS World University Ranking. Jaamacada Lund ayaa noqotay jaamacada ugu wanaagsan Sweden iyadoo kaalinta aduunka ka gashay nambarka 70-aad.
Waxaa sidoo kale kaalin fiican galay jaamacada KTH (Kungliga Tekniska högskolan) ee ku yaala Stockholm kaasoo galay kaalinta 92-aad ee jaamacadaha aduunka. Jaamacada Uppsala oo horay u ahayd kaalinta labaad ee jaamacadaha Sweden ayaa gashay 102. Halka jaamacada Chalmers Högskolan ee ku yaala Göteborg ay gashay 132.
Jaamacada Stockholm ayaa gashay 182, halka jaamacada Göteborg ay gashay 247. Linköping University ayaa gashay 286. Umeå ayaa gashay 319.
Dhinaca kale jaamacada aduunka ugu wanaagsan ayaa waxaa noqday machadka Massachusetts Institute of Technology (MIT), halka kaalinta labaad ay gashay Jaamacada Harvard . Sadexaad ayaa waxaa galay jaamacada Cambridge ee ku taala UK.
September 15, 2015 at 22:18
Sweden Cilmi ma hayso hadaa waxay Ku jirtaa kaalin aad u liidata’ walee waxba ma hayaan.